“Raharaha 26 janoary”:MBOLA MANANA TELO TAONA -
AccueilRaharaham-pirenena“Raharaha 26 janoary”:MBOLA MANANA TELO TAONA
“Raharaha 26 janoary”:MBOLA MANANA TELO TAONA
14/12/2016 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Folo taona vao mitsahatra ny fe-potoana ahafahana manenjika olona amina heloka be vava tahaka ny “raharaha 26 janoary 2009”, izay namoizana ain’olona mihoatra ny 500 ary nandravana sy nandrobana magazay sy tranombarotra an-jatony maro nanerana ny renivohitra sy ny Faritany enina. Mbola manana telo taona ireo niharam-boina nandritra iny “Alatsinainy Mainty” iny ary afaka mametraka fitoriana eny anivon’ny Fampanoavana sy ny manam-pahefana. Manan-jo hijoro ho mpangataka onitra rahateo koa noho ny fahavoazana nahazo azy na ara-materialy izany na ara-moraly, sns.
Maintin’ny setroka ny lanitr’Antananarivo io andron’ny 26 janoary 2009 io taorian’ny tsodrano nomen-dRajoelina ireo andian’olona teny Mahamasina, nihazo ny MBS Anosipatrana, niandohan’ny fandrobana sy ny fandorana magazay sy tranombarotra. TVM sy RNM, MBS, MAGRO, TIKO, SCORE, CORA, COURTS, ZOOM, CAP 3000, CITIC, TRADING CENTER, CONCEPT, sns. Manodidina ny 300 ny isan’ireo mpandraharaha malagasy mivondrona ao amin’ilay fikambanan’ireo lasibatra noho ny raharaha “26 janoary 2009”.
Niampatrampatrana ny faty nandritra io “Alatsinainy Mainty” io ankoatra ireo nodorana velona tao amin’ny TRADING CENTER Analakely. Izany rehetra izany no vokatry ny tsodrano nataon-dRajoelina tamin’ireo andian’olona nandroba sy nandoro ny tanànan’Antananarivo ary niaraha-nahita fa efa nomanina mialoha ary nirindra tokoa ny fandrobana ireo magazay sy tranombarotra: hafa ny mpamaky trano, hafa ny mpandoro, sns.
Ny filoha am-perinasa rahateo koa namela malalaka ireo mpandroba, araka ny nambarany ampahibemaso nandritra ny fitsidihany ny tapa-porohana sisa tsy may tao amin’ny TVM sy ny RNM, fanapahan-kevitra miendrika famadihana Tanindrazana (haute trahison). Koa raha atao ny kajy nanomboka ny taona 2009 amin’izao taona 2016 izao dia mbola manana telo taona ahafahany mametraka fitoriana ireo niharam-boina nandritra iny “raharaha 26 janoary 2009” iny.
Ceni : Nampiseho ny mangarahara
Hatramin’ny nisian’ny vaomiera mahelo tena mikarakara ny fifidianana, dia nampiseho ny fangaraharahana tanteraka izany vaomiera izany amin’ izao fotoana. Hatramin’izay tokoa mantsy, na ny fifidianana tamin’ ny 2013 aza, dia ny kandidà hatrany no mitady ...Tohiny
Raharaha Esplanade Analakely : Notorian’ny mpivarotra ry Ravalomanana Mivady
Ezaky ny fitondram-panjakana : Ankizy 310 011 nisitraka ny « Cantine Scolaire »
Lapan’ny Fanatanjahantena Mahamasina : Notolorana seho mendrika ireo mpampianatra Fram